Top 5 Free Android Photo Editor maka Android Mobile Photo-edezi
> Resource> Free> Top 5 Free Android Photo Editor-Best Free Android Photo edezi égwu
Android ngwaọrụ na-na-ọzọ na ndị ọzọ na-ewu ewu na ina Android ngwa ọdịnala na-amụba. N'ihi na foto ndị hụrụ, Android foto editọ dị mkpa iji nyere ha aka dezie ma retouch photos na Android ngwaọrụ conveniently.
E nwere nza nke dị iche iche android foto edezi ngwa ọdịnala nke ike-eji ịgbakwunye mmanụ ụgbọala gị Android ese foto. Ma nke onye kwesịrị ị na-ahọrọ? Ebe a kacha mma 5 free Android foto edezi ngwa ọdịnala na-depụtara maka gị akwụkwọ.
Nnọọ iji free foto editọ Android ka retouch ị photos ma tinye ihe mmetụta na ekpomeekpo gị photos.
Free Android foto nchịkọta akụkọ 1: PicSay
Na PicSay, ị nwere ike kpamkpam ịgbanwe foto gị na agba, nchapụta, wdg ma ịnyịnya ibu utu aha, ndịna-emeputa, akwụkwọ mmado, pụrụ iche foto mmetụta dị ka distortion, wdg Ọ na-abịa a nnọọ kensinammuo na mfe na-eji interface. Nke a free foto nchịkọta akụkọ maka Android bụ nnọọ uru n'ihi nkasi-eke n'ihi na ọ na-enye nnọọ mgbanwe Okwu balloon (okwu afụ) ngwaọrụ.
Free Android foto nchịkọta akụkọ 2: FxCamera
FXCamera bụ a free Android foto edezi ngwa na ọtụtụ dị iche iche nzacha, mmetụta na ntọala ịgbanwe ụzọ gị photos amasị. Site na iji dị iche iche nkà nzacha, ị nwere ike ịmepụta nkà foto na clicks!
Free Android foto nchịkọta akụkọ 3: Photoshop Express
Na Adobe Photoshop awara awara, ọrụ nwere ike kpamkpam dezie, akuku na bugharia photos, ịgbanwe foto agba, ma tinye nkà mmetụta na-ewetara photos na-esonụ larịị ozugbo. Ị nwere ike mfe ịkekọrịta edited na retouched photos ezinụlọ na ndị enyi.
Free Android foto nchịkọta akụkọ 4: Aka Agba
Mkpịsị aka Agba bụ ihu ọma a version nke MS Agba maka Android. Ọ na-ekwe ka ị na-agba ma na-abịaru ihe oyiyi ma ọ bụ tinye agba ka oyiyi na ide kwaaji. Nke a free Android foto nchịkọta akụkọ na-karịsịa mmasị site na-eto eto.
Free Android foto nchịkọta akụkọ 5: Photo Funia
PhotoFunia bụ a fun foto edezi ngwá ọrụ na-enyere gị aka tinye nnọọ jụụ foto mmetụta gị photos. Na ya 150+ Mpaghara, ị pụrụ itinye ihu gị na a billboard, a stampụ, ma ọ bụ na a Warhol-dị ka ọrụ nke mmapụta nkà. Nke a free Android foto edezi ngwa ga chọta ndị mmadụ na-eche ihu na fanye iru-idaha na ị na họọrọ. Ezi na-akpali foto edezi ngwa!